ပြည်သူ့: ဒါဟာသူတို့ကိုအကြားကျော်ဖွင့်: Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ထက်နည်းတစ်နှစ်အကြာတွင်ခွဲထွက် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "လူတွေက: ဒါဟာသူတို့ကိုအကြားကျော်ဖွင့်: Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏တစ်နှစ်ထက်လျော့နည်းပြီးနောက်ခွဲ
ပြည်သူ့: ဒါဟာသူတို့ကိုအကြားကျော်ဖွင့်: Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ထက်နည်းတစ်နှစ်အကြာတွင်ခွဲထွက်
Tele RELAY တစ်ခု 14 သြဂုတ်လ 2019
Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth မကြာသေးမီက၎င်းတို့၏လက်ထပ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ထက်လျော့နည်းကွဲကွာ။ ဒီမျှော်လင့်မထားတဲ့ချိုးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကဘာတွေလဲ?
Getty Images / စံပြပုံရိပ်
အဆက်မပြတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကောလာဟလ၏နှစ်များစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာစုံတွဲနောက်ဆုံးတော့လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်၎င်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ကိုအတည်ပြုထားပြီးတဲ့အခါမှာ Miley Cyrus ရဲ့နဲ့ Liam Hemsworth ၏ပရိသတ်များဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏: အခမ်းအနားဖွင့်ခရစ်စမတ်ဒီဇင်ဘာ 23 2018 မတိုင်မီရာအရပျကိုယူ။
Instagram ကိုပေါ်မှာဤ post ကို View
Miley Cyrus ရဲ့ (@mileycyrus) က shared တစ်ဦးက post ကို on ဒီဇင်ဘာ 26, 2018 မှာ 12: 44pm PST
ရိုက်ကူးရေးအပေါ် 2009 အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူကို Liam နှင့် Miley ၏မတ်ေတာဇာတ်လမ်း, နောက်ဆုံးသီချင်းယင်း၏ခက်ခဲအချိန်လေးမပါဘဲမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူတို့ဟာ 2013 နှစ်ကြာပြီးနောက်အတူတူပြန်ရတဲ့မတိုင်မီ2အတွက်ပထမဦးဆုံးအကွဲကွာ။
အဆိုပါစုံတွဲသည်ဒီဇင်ဘာလ 2018 မှာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့နှလုံးသားများအရည်ကျိုသိရသည်။ သူတို့မကြာသေးမီကကွဲကွာကြားလျှင်ဒါသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုစိတ်ကူး!
လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ထက်နည်းတစ်နှစ်ပြီးနောက်, Miley နှင့် Liam ဟာသူတို့ရဲ့သီးခြားနည်းလမ်းများနထေိုငျကိုဆက်လက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဆိုတော်တစ်ကိုယ်စားလှယ်မဂ္ဂဇင်းမှကြေညာချက်ထဲမှာပြိုကွဲအတည်ပြုခဲ့သည် လူတွေ:
Liam နှင့် Miley ခွဲခြားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မိတ်ဖက်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီပြောင်းခြင်း, သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတှကျကောငျးသောသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကွဲကွာကြသည်ပင်စဉ်တုန်းပဲသူတို့အတူတူရှိလူအပေါင်းတို့သည်တိရစ္ဆာန်များ၏ကျိန်အပ်သောမိဘများဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီခြေလှမ်းနှင့် privacy ကိုလေးစားရန်သင့်အားမေးကြည့်ပါ။
Liam Hemsworth (@liamhemsworth) က shared တစ်ဦးက post ကို on မတ်လ 6, 2018 မှာ 7: 13am PST
အဆိုတော် Instagram ကိုပေါ်နှင့်သူမ၏မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်ဝတ်ဆင်မခံခဲ့ရသောကြောင့်၏ရုပ်ပုံ posted လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှတင်းမာမှုများ၏ပထမဦးဆုံးကောလာဟလများပြန့်နှံ့လာတယ်။
9 သောကြာနေ့သြဂုတ်လအတွက်စကားပြန် ကျနော်တို့ Stop မရပါ Kaitlynn Carter က, Brody Jenner ၏ယခင်ဇနီးနမ်းမြင်ကြပြီ။ သူတို့အီတလီနိုင်ငံရှိ Lake Como မှာအားလပ်ရက်ပေါ်မှာနေစဉ်နှစ်ခုအမျိုးသမီးငယ်အတူတကွမေတ္တာရှိတဲ့အခိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Kaitlynn Carter က (@kaitlynn) က shared တစ်ဦးက post ကို on သြဂုတ် 9, 2019 မှာ 3: 08pm PDT ရန်ကုန်
Miley နှင့် Kaitlynn တစ်ပါတ် Kaitlynn နှင့် Brody အကြားချိုး၏သတင်းကိုအပြီးအီတလီမှပျံသန်း; လည်းတနှစ်အဘို့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
Miley နှင့် Liam ဟာသူတို့ရဲ့ခွဲခြာများအတွက်အကြောင်းပြချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပြုမလာကြနဲ့ကပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအာကာသလေးစားအရေးကြီးပါသည်။
ပက်ထရစ် Poivre ဃ
Charlotte DIPANDA နှင့် Koffi Olomide, ရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု!
က Tiger Woods ကတော့ BMW ကားဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပါဝင် - ဗွီဒီယို
Tekashi 6ix9ine testifying များအတွက် "တခုတ်တရလူ" ဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ - လူတွေ
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်ရှမီးယားအပေါ်ဖျန်ဖြေ၏ Trump ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ပါသည်: Asaduddin Owaisi | အိန္ဒိယသတင်း
စမတ်ဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ် IKEA ပစ်လွှတ်မှာသဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ HomeKit
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,153
TECH & Telecom1,565